तपाईलाई थाहाछ, पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको लोकप्रियताको कारण, यस्ताछन् दिव्यवाणी - Filmy News Portal Of Nepal
तपाईलाई थाहाछ, पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको लोकप्रियताको कारण, यस्ताछन् दिव्यवाणी
भारतको राजस्थानको सिकरका पूर्व सूर्यबंशी राजकूलका राजा बिक्रम सिंह र रानी बिपुला सिंहकी छोरी नेपालका पूर्वराज्ञी हिमानी शाहले धेरै उतार-चढावहरुको सामना गर्नुपरिरहेको छ । उनि अहिले समाजिक सेवामा निकै नै सक्रिय छिन् । तर, उनको अमजिक सेवाको चर्चा निकै कम मात्रामा हुन्छ । जनतासँग निकैनै सुमधुर र स्वच्छ छवि बनाएकि हिमानीले आफ्नो पतिका कारण थुप्रै समस्या भोग्नुपर्यो ।
राजपरिवारको बुहारी र भाविष्यकि रानीको रुपमा हेरिएकि हिमानी सधैँ जनताबिच लोकप्रिय बनिन् । समाजिक सेवामा लागेर नागरिकसँग नजिक बनेकि हिमानीका चाल, चलन र व्यवहार सधैँ जनताकालागि लोकप्रिय बने । युवराज्ञीको हैसियतमा होस् वा सामान्य नागरिक हुँदा, हिमानीका वि’वादास्पद समाचार कहिले आएन ।
पति पारश शाहको एकपिच्छे अर्को नकारात्मक समाचारहरु आइरहदा पनि हिमानीमा कुनै चिन्ताको भाव झल्किदैन । मनमा हजारौँ पि’डा भएपनि हिमानीले ती कुरा अगाडी ल्याइनन् ।
हिमानीका १० प्रेरणादायी भनाईहरु:
– नष्ट हुन्छ, सौन्दर्य विलीन हुन्छ, जिवन तेजसंग समाप्त हुन्छ,शक्ति लुप्त हुन्छ तर देश लागि तिमिले गरेको योग्दान अजर र अमर रहनेछ । त्यसैले म वा मेरो होईन हामि नेपाली भनौ , नेपाली बनौ सम्हालौ नेपाल मुल्याकंन एकदिन अवश्य हुनेछ ।
– आत्मगान होईन राष्ट्रगान गर्न पाउ, राष्ट्रकै लागि बाच्न र बलिदान दिन पाउ ।
– समाजमा भ्रान्ति छरेर निर्दोष लाई दोषी बनाईन्छ निर्दोष वचनका छर्राहरु सहेर पनि आफ्नो विजय हुने दिन यहि कुराले मन बुझाएर प्रतिक्षा गरेका हुन्छन । “सत्य र सुर्य लुकाएर लुक्दैनन’ ।
– बदला लिएर होईन बदलिएर देखाउ !
– आफन्त तिनै हुन जसले प्रतिकुलतामा पनि कहिले साथ छोडदैनन् ।
– राम्रो समयको प्रतिक्षा नगर्नुस बरु समयलाई राम्रो संग प्रयोग गर्नुहोस सफलता अवश्य मिल्नेछ ।
– कोहि गरीब भोको नरहोस भनि भगवान त मुर्ति बनि बेचिनुहन्छ भने हामि त मानिस हौ त्यसैले कसैको दुखमा हासेर मुखदर्शक बन्नुभन्दा एक अर्काको दुखको सहयात्री बनौ ताकि यस संसारमा कोहि दुखि देख्न नपरोस !
– यस संसारमा मानिसलाई जन्म दिन जति गार्हो छ त्यो भन्दा गार्हो छ मान्छे भएर जिउन ।
यसरि नै आगामी दिनहरुमा पनि उनले दिन दुखिहरुको सेवा गरि रहने बताउछिन । अहिले उनि र उनका छोरी पुर्णिमा शाहले नाचेको टिक टकको भिडियो भाइरल पनि बानी रहेको छ ।